Hiroyuki Furukawa – Creator – MMANIME
My Sister, My Writer Light Novel ရေးတဲ့စာရေးဆရာ Yuu Nagami ကNovel ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ခါမှဆုမရခဲ့ဘူး ဘယ်နှခါဘဲသူကျရှုံးရှုံးသူ့ဖြစ်ချင်တဲ့စာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သူဆက်ကြိုးစားတယ် သူနောက်ဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့သူစရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Chikai Towano ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့တစ်ယောက်ကိုသူသတိထားမိသွားတယ် မကြာခင်မှာတာ့ ကလောင်နာမည်နောက်ကွယ်ကသူက သူ့ညီမ Suzuka မှန်းသူသိသွားခဲ့တယ် သူ့ညီမ Suzuka က Yuu Nagami ကိုသူကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာမဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့ တခြားသူတွေကိုမပြောပြနိုင်လို့ သူ့အကို Yuu Nagami ကိုသူ့နေရာအစားဟန်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် Yuu Nagami ကသူ့ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တွေကိုမထုတ်နိုင်သေးခင်အထိသူညီမနေရာမှာဟန်ဆောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ် Yuu နောက်တစ်ခုမသိခဲ့တာက သူ့ညီမ Suzuka ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာပါဘဲ Yuu ကအဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ သူ့ညီမဆီကနေ ပညာတွေယူပြီး သူတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ light novel စာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားနိုင်မလား သူ့ညီမက သူ့ကိုကြိုက်နေတာကိုသိသွားမလားဆိုတာကိုတော့.... Episode 1 Download Episode2Download Episode3Download Episode4Download Episode5Download Episode6Download Episode7Download Episode 8 Download Episode9Download Episode 10 Download OVA 1 ...
My Wife is the Student Council President Season2ဒါလေးက Season2ဆိုတော့ Season 1 ကြည့်ပြီးတဲ့ သူတွေအတွက် ဘာမှ intro ဝင်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့တူတယ် ဒါပေမဲ့ မေ့နေမှာဆိုးလို့နည်းနည်းအစဖော်ပေးလိုက်ပါမယ် Ui Wakana ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက သူတက်နေတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းကောင်စီ ဥဣဌလုပ်တယ် သူ့ရည်မှန်းချက်ကြီးကတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့အချစ်ရေးတိုးတက်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးပေါ့ဗျာ Season 1တုန်းကဆိုရင် ကွန်ဒုံးတောင်လိုက်ဝေပေးပါသေးတယ် သူကအဲ့လိုကောင်မလေး သူ့ကိုအမြဲထိန်းနေရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူက Hayato Izumi သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးက စေ့စပ်ထားတဲ့သဘောမျိုး Ui ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်း Izumi စိတ်ကိုမရရအောင်စွတတ်တဲ့ကောင်မလေး ဟိုကောင်ကလွန်ကုန်မှဆိုးလို့ စိတ်ကိုထိန်းရတယ် ဒါပေမဲ့ သူလည်းယောကျ်ားလေးဘဲဘယ်ကြာကြာထိန်းထားနိုင်မှာလဲ အဲ့လိုနဲ့ Ui ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ဆွပြီး Izumi ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းစိတ်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့... ဆက်ကြည့်ကြပါလို့ ဟဲဟဲ... Episode 1-12 Download Link (GDrive Link) Download Link (MEGA Link) Episode 1 Download Link (GDrive Link) Download Link (MEGA Link) Episode2Download Link (GDrive Link) Download Link (MEGA Link) Episode3Download Link (GDrive Link) ...
My Wife is the Student Council President Season 2
My Wife is the Student Council President ဒီ Anime လေးကဆိုရင်‌တော့ Ecchi နဲ့ Comedy ‌ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရသာမျိုးကိုခံစားရမှာပါ Mc ဟာဆိုရင် ‌ကျောင်းကောင်စီရဲ့ ဒုဥဣဌြဖစ်ပြီး ‌တွေ့ကရာလူကွန်ဒုံးလိုက်ဝေတတ်တဲ့ ဥဣဌကိုလိုက်ထိန်းနေရပါတယ် အဲ့ဥဣဌလေးဟာလည်း အနာဂါတ်မှာ MC ရဲ့ဇနီးချော‌လေးဖြစ်လာမယ့်သူပါ တစ်နေ့ MC တစ်ရောက်ကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက်လို့မှမကြာသေး MC ရဲ့ဇနီးလောင်းလေးက အထုပ်အပိုးအပြည့်အစုံနဲ့ရောက်ချလာပါရော ပထမတော့ MC တစ်ယောက်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်းမှာ MC ရဲ့ဇနီးလောင်းလေးကသူ့အမေပေးလိုက်တဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပါတယ် ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ MC နဲ့သူနဲ့ ငယ်ငယ်လေးထဲက နှစ်ဖက်မိဘသဘောတူထားတဲ့အတွဲဖြစ်ကြောင်း အခုသဘောတူထားတာကိုအကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ MC တစ်ယောက်သူတို့မိဘတွေလုပ်ချင်ရာလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံသွားမလား ဒါမှမဟုတ် ငြင်းဆိုသွားမလားဆိုတာတော့..... Episode 1-12 Download Link (MEGA Link) Episode 1 (Mediafire link) Episode2(Google Drive link) Episode3(Mediafire link) Episode4(Mediafire link) Episode5(MEGA link) Episode6(Mediafire link) Episode7(Mediafire link) Episode 8 (Mediafire link) Episode9(Mediafire link) Episode 10 (Mediafire link) Episode 11 (Mediafire link) Episode 12 (Mediafire ...